Na-akwado ụlọ ọrụ, ndị na - ebunye ya - China na - akwado ndị nrụpụta
Aluminium Vetikal na-alaghachi Grille
Vetikal Aluminium Ala Register Diffuser
Wood Register Flushmount Ft Register na Steel A ...
Plastic Register Louvered Ft Register ABS White a ...
Wood Register Oak Floor Louvered Debanye aha Solid Oak
Steel Baseboard Return Ikuku grille White
HDG Nkedo Iron Single Pipe ala Nkwado
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị HDG igba ígwè otu anwụrụ ala na-akwado na-haziri maka suspending anwụrụ ebe longitudinal ije na vetikal ukpụhọde a chọrọ. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. Ọzọkwa, enwere ọgwụgwọ dị iche iche maka nhọrọ ị họọrọ: Plain, Hot tinye kpaliri, epoxy na Green kpaliri imecha, iji gboo mkpa gị dị iche iche.
HDG Nkedo Iron Pipe ala ala Guzosie
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị HDG igba ígwè anwụrụ ala guzo na-haziri maka suspending ọkpọkọ ebe longitudinal ije na vetikal ukpụhọde a chọrọ. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. Ọzọkwa, enwere ọgwụgwọ dị iche iche maka nhọrọ ị họọrọ: Plain, Hot tinye kpaliri, epoxy na Green kpaliri imecha, iji gboo mkpa gị dị iche iche.
High Load amị Rubber Nkwado Fanye
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị nnukwu ibu na-agba roba support inserts na-eji na-akwado ihe nke a gwara mmanụ ọkpọkọ iji gbochie ndinuak nke mkpuchi. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na Middle East na Eshia. Ọzọkwa, 13mm, 19mm, 25mm, na 50mm ọkpụrụkpụ dị.
Mgbapu mkpuchi mkpuchi
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị mkpuchi mkpuchi ọta na-eji n'etiti hanga elu na a gwara mmanụ ọkpọkọ iji gbochie ndinuak nke mkpuchi. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America.
Nkwado Sadulu na U-bolt
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị sadulu support na U-bolt bụ stanchion mesịa support ebe vetikal ukpụhọde adịghị mkpa. Ọ natawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. E wezụga nke ahụ, U-bolt nwere ike inye nkwụsi ike ọzọ.
Kemeghi Pipe Nkwado
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị kemeghi anwụrụ support bụ NPT anwụrụ welded na anwụrụ sadulu na a NPT anwụrụ mkpọchi aku ikwe maka vetikal ukpụhọde ke ifịk stanchion. Ọ natawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Kemeghi Pipe Nkwado Assembly
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị kemeghi anwụrụ support nzukọ Ezubere maka ịkwado kehoraizin anwụrụ si stanchions ebe vetikal ukpụhọde dị mkpa. Ọ natawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
Kemeghi Pipe Nkwado Assembly na U-bolt
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị kemeghi anwụrụ support nzukọ na U-bolt Ezubere maka ịkwado kehoraizin anwụrụ si stanchions ebe vetikal ukpụhọde dị mkpa. Ọ natawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. Ọzọkwa, e nwere ọgwụgwọ dị iche iche dị elu maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Nke nwere ike ịmalite, Zinc plated, epoxy na Green kpaliri iji mezuo mkpa gị dị iche iche.
HDG Kemeghi Nkedo Iron ala hanga
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị HDG kemeghi nkedo ígwè ala hangers e mere maka suspending ọkpọkọ ebe longitudinal ije na vetikal ukpụhọde chọrọ. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. Ọzọkwa, enwere ọgwụgwọ dị iche iche maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Zinc-plated, Hot tinye kpaliri, epoxy na Green kpaliri imecha, iji gboo mkpa gị dị iche iche.
HDG Nkedo Iron Pipe ala oche
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị HDG igba ígwè anwụrụ ala oche e mere maka suspending ọkpọkọ ebe longitudinal ije na vetikal ukpụhọde a chọrọ. Ha anatawokwa nnukwu ewu ewu na gburugburu ụwa, ọkachasị na North America, South America, Middle East na Asia. Ọzọkwa, enwere ọgwụgwọ dị iche iche maka nhọrọ ị ga-ahọrọ: Zinc-plated, Hot tinye kpaliri, epoxy na Green kpaliri imecha, iji gboo mkpa gị dị iche iche.